Uyikhuphela njani iFotoomath yePC yasimahla (inguqulelo yamvanje) | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | 08/02/2021 18:31 | Ukuhlaziywa ukuba 19/02/2021 18:42 | Android, ngokubanzi, Tutorials
IfotoMath iye yathandwa Isixhobo seefowuni eziphathwayo, ngayo sinokusombulula nayiphi na ingxaki yemathematics sisebenzisa ikhamera yesiphelo sethu. Umphuhlisi wayo ubize usetyenziso njengesibali sokuqala esisekwe kwikhamera, kodwa sisixhobo esibaluleke kakhulu ekufundiseni ekhaya, kuba inokunceda kakhulu kubazali abafuna ukunceda abantwana babo benze umsebenzi wesikolo. Ngalesi sicelo sithatha ngokulula ifoto ye-equation kwaye isinika iziphumo, kunye nemiyalelo yokuyenza inyathelo ngenyathelo.
Kodwa, Ngaba esi sicelo sinokusetyenziswa kwikhompyuter yethu? Ewe, nangona oku kufuneka sisebenzise i-emulator ye-AndroidAyisiyongxaki kodwa inokungonwabi kwezinye kwaye inzima. Iluncedo ngakumbi kwabo bangafuni ukusondela kwiselfowuni yabo ngelixa befunda okanye besebenza. Ngaphandle kwamathandabuzo, wonke umfundi okanye umzali uyakuxabisa ukuba nesi sixhobo kwizixhobo ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Kweli nqaku siza kukubonisa indlela yokukhuphela i-PhotoMath kwi-PC yakho simahla kuhlobo lwayo lwamva nje.
1 1. Khuphela i-Android Emulator kwi-PC
2 2. Faka i-emulator ye-Android kwi-PC yethu okanye kwi-MacOS.
3 3. Khuphela iPhotomath
4 IiApple zeApple ezinomdla onokuZenza kwiPC
1. Khuphela i-Android Emulator kwi-PC
Esi sicelo siyafumaneka kwi-Android ke kuya kufuneka silingise i-Android kwi-PC yethu, kuba zininzi iinkqubo, kodwa siza kucebisa enye ngokukodwa, zii-Bluestacks. Yi Ngaphandle kwenkqubo, Ukongeza kokusebenza kakhulu, ukuyifaka kunethuba lokuba ukuba sinengxaki, siya kuba namawaka ezisombululo kunqakrazo olunye kwinethiwekhi.
Khuphela iiBluestacks kule khonkco lePC okanye iMAC.
Ungajonga kolu dityaniso lwee-emulators ze-Android esele sizenzile kwiwebhu, kule khonkco kwimeko yokuba uneMacOS, okanye kwenye le ukuba unePC yeWindows.
2. Faka i-emulator ye-Android kwi-PC yethu okanye kwi-MacOS.
Ukufakela i-Bluestacks emulator ilula kakhulu, kufuneka singene kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye siqale ukukhuphelaSiza kuyifumana kwifolda yokukhuphela yeqela lethu. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe ngokupheleleyo, siya kuyenza ifayile yokufaka kwaye siyigqibe ngokulandela yonke imiyalelo, ulumke ungafaki izongezo kwisikhangeli okanye wamkele naluphi na uhlobo lwentengiso ngeposi.
3. Khuphela iPhotomath
Ukuba ne-emulator efakwe ngokupheleleyo kwikhompyuter yethu, kufuneka siyisebenzise kwaye jonga ibha yokukhangela, kuyo siya kubhala iPhotoMath kwaye siyikhethe. Ukufikelela kwivenkile yesicelo sikaGoogle kuya kuvulwa kwaye iya kuboniswa kuthi kwii-Bluestacks. Kuya kufuneka ucinezele iqhosha lokufaka njengoko besinokwenza nakwisiphi na iselfowuni se-Android.
Nje ukuba ukufakela kugqityiwe, siya kuyifumana kwi icon yethu idrowa yezicelo ezifakiwe, ukuba asiyifumani, siya kuyifumana sisebenzisa i-injini yokukhangela. Gcina ukhumbula ukuba usetyenziso lwenzelwe iifowuni eziphathwayo ukuze lubenazo ezinye iimpazamo xa ulusebenzisa kwi-emulator yekhompyuter.
Ezi zikhombisi ziyasebenza zombini kwiikhompyuter ezinenkqubo yokusebenza yeWindows kunye neekhompyuter ezinenkqubo yokusebenza ye-macOS.
IiApple zeApple ezinomdla onokuZenza kwiPC
Zininzi iinkqubo ezinomdla okanye imidlalo esingayifumaniyo kwikhompyuter yethu, kodwa esinokuyilinganisa ngaphandle kweengxaki ngeBluestacks, siza kuthiya ezinye zezona zinomdla.
Umhleli wesithombe esimangalisayo esiya kwenza iifoto zethu ezindala zibonakale njengezona zangoku zithathiweyo kunye neekhamera zala maxesha, sisicelo esinomsebenzi wokucoca iifoto zethu ezingacacanga okanye ezinepikseli esigcina kuyo xa iimfonomfono zazingeyiyo le nto ziyiyo ngoku.
Iziphumo ziyamangalisa, Nangona zingayi kujongeka njengezona foto zibalaseleyo sizithatha namhlanje, ziya kunika ukuphakama kobuso ngokubanzi kuzo zonke ezo foto esingafuni kuzilahla. kodwa ungabonisi. Ukuba sinegalari enkulu yeefoto ezindala ebesikhangela indlela yokuzilungisa ixesha elide, eli lithuba lethu kwaye eyona nto ilunge kakhulu kukuba isimahla kwi-Android ke ngoko kufuneka siyifakele kwaye siphinde siyibambe kwakhona Zonke ezo foto nganye nganye kwaye ugcine iikopi ezihleliweyo kwifolda.
Nangona kukho uguqulelo lwewebhu lweWhatsApp olunemisebenzi emininzi, ihlala ixhomekeke kwisiphelo sethu kwaye ayinayo yonke imisebenzi esiyonwabelayo kwiimowudi zethu, kunye nohlobo lwayo lwe-Android yesiphelo, Siya kulonwabela usetyenziso oluzimeleyo ngokupheleleyo kuWhatsApp apho sinokunxulumana nenombolo yomnxeba kunye nokwenza iifowuni zevidiyo kunye nemisebenzi yayo epheleleyo ngaphandle kwengxaki.
Esi sicelo sidumileyo sokunyanzela iiforamu zethu esizithandayo, Ukuba zonke zidityanisiwe kunye nenkqubo yemiyalezo yethutyana ezimeleyo, yenye yezo zicelo esinokuzonwabela nge-emulator ye-Android. Ukongeza ekulandeleni iiforamu zethu esizithandayo, Ikwasivumela ukuba silayishe iifoto kwaye sibe nezilumkiso Zonke zazo kwangoko ngokusebenzisa izaziso zoTsalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyikhuphela njani iFotoomath yePC yasimahla (inguqulelo yamvanje)